काेराेना निकाे हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सांसदले मह उपहार दिएपछि ! हेर्नुस् भिडियो ! « Bagmati Online
काेराेना निकाे हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सांसदले मह उपहार दिएपछि ! हेर्नुस् भिडियो !
काठमाडौं । मुस्ताङका सांसद प्रेम प्रसाद तुलाचनले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई हिमाली मह दिएको खुलासा गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद तुलाचनले यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।